Anosy: Tsy tazana ny Praiminisitra
jeudi, 18 janvier 2018 21:56
Voamariky ny mpanara-baovao ny tsy nanotronan'ny Praiminisitra lehiben'ny governemanta Solonandrasana Mahafaly Olivier ny lanonam-pitokanana ny trano vaovao ho fiasan'ny ministeran'ny indostria sy ny sehatra tsy miankina teo Anosy Antananarivo androany, lanonana notarihin'ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina, natrehin'ny filohan'ny andrimpanjakana toy ny filohan'ny CFM, Maka Alphone sy minisitra vitsivitsy.
"Tsy misy antony manokana fa fandaminana anatiny fotsiny ihany", hoy ny Talen'ny seraseran'ny Primatiora Ranaivoarisoa Fifaliana. Tao amin'ny TVM, izay tsy lavitra eo, nanao fandraisam-peo fandaharana izy, hoy indray ny loharanom-baovao hafa.
Olom-boafidy HVM iray avy any Fianarantsoa kosa no nilaza fa "Vaky ny ady" raha nanazava ny antony tsy nahitana ny Praiminisitra niaraka tamin'ny filoha tamin'ny lanonam-pitokanana tranon'ny ministera ity.
Izay ve no antony tsy nitafan'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny mpanao gazety taorian'ny lanonana fa niditra avy hatrany tao anaty fiara ary niala teny an-toerana.